Taliyaha Hey’adda Nabadsugida ayaa sheegay in dhalinyarada ugu badan ee Soomaaliya isku qarxiya ay yihiin kuwa ka yimaada qurbaha – STAR FM SOMALIA
aliyaha Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka Jen. C/raxmaan Tuur Yare ayaa sheegay in dhalinyarada ugu badan ee Soomaaliya isku qarxiya ay yihiin kuwa ka yimaada qurbaha ama dibada.
Jen Tuur Yare ayaa hadalkan ka jeediyay shirka dhalinyarada ee ka furmay magaalada Muqdisho, isagoo si gaar ah ula hadlay dhalinyarada qurbaha ee ka qeyb galeysa shirkaas.
Dhalinyaro badan oo qurbaha ka timid ayaa ka bar bar dagaalama Al-Shabaab, waxaana ay ka qeyb qaateen weeraro iyo qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho.
Magaalada Baledweyne ee Gobolka Hiiraan waxaa hashiis ku kala saxiisday beelihii ku dagaalamay(Daawo Sawirada)